Nyaanni coomni, zayinnii fi dhadhaan itti baay’ate dhibee tasaa onnee fi sammuu keessatti dhiigni akka dhangala’uuf sababa akka ta’an ibsame – Fana Broadcasting Corporate
Nyaanni coomni, zayinnii fi dhadhaan itti baay’ate dhibee tasaa onnee fi sammuu keessatti dhiigni akka dhangala’uuf sababa akka ta’an ibsame
Finfinnee, Gurraandhala 6,2011 (FBC)-Nyaanni coomni,zayinnii fi dhadhaan itti baay’ate dhibee tasaa onnee fi sammuu keessatti dhiigni akka dhangala’uuf sababa akka ta’an ibsameera.
Nyaata gosa kanaa yeroo baay’ee soorachuun dhukkuboota ciccimoo ajjeessoo ta’aniif akka nama saaxilan Waldaan Fayyaa, Misoomaa fi Farra Busaa marii qaama dhimmi ilaalatu waliin taasisan irratti dubbataniiru.
Nyaata zayita baay’ee of keessatti kuufate yeroo baay’ee soorachuun dhiigni saffisa barbaadamuun akka hin daddabare gochuun dhiigni gara onnee, sammuu akkasumas gara kutaalee qaamolee keessaa gara garaa hamma barbaadamuun akka hin geenye gochuun dhukkuba tasaaa onnee fi sammuu keessatti dhiigni akka dhangala’uuf akka saaxilu qorannoon yeroo dhiyootti mul’ateera.
Dhaabbanni fayyaa addunyaa qorannoo gaggeesseen, waggaa waggaan namoonni miliyoona 17 ol ta’an dhukkuba tasaa onnee fi dhiigni sammuu keessatti dhangala’uu akka muudatu addaan baasuu mariicha irratti ibsameera.
Ministeera Fayyaatti Ofiisara Siinara kan ta’an obbo Afandii Usumaan gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaa wabii godhachuun barreeffama dhiyeessanirratti namni tokko nyaata guyyaatti fudhatu kaalorii 2000 keessaa nyaata zayitaa giraama 2.2 gadi akka fudhatu gorfama jedheera.
Daayreektarri ol aanaa waldichaa Dooktar Abbaraa Mihirataa waldichi erga hundaa’ee calqabee keessattuu dhukkuboota daddarboo hin taane irratti, hawaasa xiyyeeffannoo ol aanaa qabachiisuun hojii isaanii hojjachaa akka jiran ibsanii gara fulduraattis cimisanii kan itti fufan ta’uu dubbataniiru.
Dabalataanis Daayreektarichi akka gorsanitti hawaasni kamiyyuu nyaata zayinni itti hin baay’anne soorachuu akka qaban kaasaniiru.